Rikoorrada Screen jira barnaamijyo software loo isticmaalo ujeeddo ah qabsadaan wax kasta oo aad samaynaysid on desktop oo diinta soo galay video ah. The videos in ay qabteen oo isticmaalaya software waxaa ugu horayn loo isticmaalo bandhigyo, walkthroughs ciyaarta iyo guud ahaan sida loo warbaahinta. Isticmaalka software duubo shaashadda waa mid aad u fudud. Waxaad kaliya inay riix badhanka rikoorka si aad u bilowdo nidaamka lagu qoro dibna u leeyihiin in ay u badbaadin sida file video ka dib oo aad la via YouTube saaxiibo aad la wadaagi kartaa. Kuwa soo socda waa qaar ka mid ah rikoorrada screen ugu wanaagsan ee Windows.
Part1: 4 talinayo Best Screen oo la wareegtay goobo loogu talagalay dadka isticmaala daaqadaha
Part2: Video qalab tafatirka
Snagit waa ku duuban premium screen taas oo ah mid aad loo jecel ka mid ah xirfadlayaasha ah ee screens computer ay qabsadaan. Waxa ugu fiican ee ku saabsan software tani ay tahay taageerada fiican casriga ah, taas oo ah waxaa la bixiyaa lacag la'aan ah. Qalabka tafatirka awood badan, kartida si loo dhigay furayaasha kulul iyo is-dhexgalka aan xuduud lahayn adeegyada ku salaysan daruur sameeyo Snagit software ka duubo shaashadda ugu fiican ee suuqa. Inkasta oo ay jiraan version oo bilaash ah software ka heli karo, inta badan qalabka ma loo isticmaali karaa iyada oo aan iibsan edition joogtada ah ee caymiska.
Ezvid waa xirmo software ah oo lacag la'aan ah lagu duubo shaashadda waa fiican ee kuwa isticmaala kuwaas oo raadinaya hab lagu shaashadaha video-record iyo iyaga geliyaan isla on YouTube. Lahaanshaha isku dhafan video editor ka mid ah qodobada lagu daray ee taariikhqorihii screen oo aad siidaysay ka hawsha helidda ah editor video dibadda sixiddiisa videos ah. Qaar ka mid ah qaababka kale ee waa weyn ee Ezvid yihiin Avv hadal iyo gacan ku haynta xawaaraha. Waxaa intaa dheer, waxaa sidoo kale waa doorasho ee ku daray qoraalka u dhexeeya laba clips sidoo.
Webinaria waa taariikhqorihii screen kale u fiican kaas oo la suuq u isticmaala laylis u baahan duubo shaashadda ujeedooyin aasaasi ah sida samaynta bandhigyada. Feature ugu wanaagsan ee software tani waa ay interface fududahay in la isticmaalo iyo hawlaha fudud kaas oo u ogolaanaya bilowga ah fursad ay ku adkaadaan software-ka daqiiqo gudahood. Webinaria siinayaa fursad si ay u qoraan screen videos aad saddex heerar kala duwan jir, 5, 10 iyo 15 fps (loox kasta labaad) aad. Waxaad fursado badan diyaar u ah doorashada deegaanka qabashada aad sidoo kale.
Cam Studio ka mid ah software ka recoding screen ugu fiican oo bixiya fursado badan oo si user ah. Marka la isticmaalayo software this lagu qoro shaashadaha aad, aad u hesho fursad ay ku record codadka barnaamij kale, gab dulqabo mouse ka, xidhi dhawaaqa ama isticmaal makarafoon loogu daray codkaaga u gaar ah. La mid ah si ay u Webinaria, waxaa jira fursado loo heli karo doorashada degaanka ee shaashadda in aad rabto in aad si ay u qoraan. Sababtoo ah isagoo qaababka aad u badan si ay u bixiyaan, Cam Studio waa mid ka mid ah rikoorrada screen ugu weyn loo isticmaalo.
Sidaas darted, haddii aad rabto in aad qortid shaashadda ujeeddo kasta ka dibna doorashada mid ka mid ah rikoorrada screen kor ku xusan waa kooras ugu wanaagsan garoomada.
Part2: Video ayeey Tool
Inta badan, si fudud lagu qoro shaashadda ma aha hawsha ay u dhammaystiraan haddii aad isku daygooda in ay qaar ka mid ah Casharrada online, bandhigyo video ama videos gameplay u Youtube ama website. Taariikhqorihii screen qaarkood sida Ezvid laga yaabaa in la qalab dhisay-in fudud editor, kaas oo kuu ogolaanaya in aad samayn tafatirka aad u kooban oo ku saabsan muuqaalka duubo cayriin soo. Laakiin waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay xoogaa badan oo horumarsan, laakiin raqiis ah iyo sidoo kale fududahay in la isticmaalo qalab video tafatirka, dhihina in ay sameeyaan wax kasta oo tafatir qoon gaystay, laakiin kaliya tashiilo qaar ka mid ah in aan kala tagno video Qaybo, ama wax ka bedel soo baxay audio ciyaarta oo dar music, ayaaba cod , dalban doonta mahrajaan ama kala guurka (libdhi soo baxay / in, Gac- mihiinna, iwm) inta u dhaxaysa goobaha iwm Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) noqon lahaa doorasho fiican ee ujeedadaas.
Interface user dareen leh, si gaar ah loogu talagalay arday
Muuqaalada tafatirka qurux badan, cut, dalagga, kala, isku shaandheyn, video dahaadhaa (PIP), Green screen, Muuse, screen kala oo dheeraad ah
In ka badan 300 oo saamayn gaar ah oo dhigaya niyadda sida Qaamuuska ah Hollywood
Videos Support toogtay ama la duubay qalabka ama qalabka wax
Share sida aad jeceshahay, daraasiin qaabab wax soo saarka oo ay taageerayaan, geliyaan si ay wax goobaha la wadaago video ama gubi in DVD.
Hel download a free hoos ku qoran (Free muddo 30 maalmood ah):
> Resource > Video > Best rikoorrada Screen